Shakhsiyaad aad ugu dhow Trump oo wax laga weydiinayo faragelinta Ruushka - BBC News Somali
Shakhsiyaad aad ugu dhow Trump oo wax laga weydiinayo faragelinta Ruushka
Shakhsiyaad aad ugu dhow madaxweyne Donald Trump ayaa maanta la weydiin doonaa su'aalo ku aadan faragelinta la sheegay inuu Ruushku ku sameeyay doorashadii madaxtinnimada Mareykanka.
Wiil u dhalay Trump, wiilka uu soddoga u yahay iyo xubin hore uga tirsanaa kooxdii ololihiisii doorashada ayaa maanta hor imaan doono guddiga Senate-ka ee braitaanka ku sameynayo faragelinta lagu eedeeyay Ruushka.
Donald Trump Jr, Jared Kushner iyo Paul Manafort ayaa sharrxaad ka bixin doono inay xiriir la lahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Ruushka iyo in kale.
Arrimaha wax laga weydiin doono waxaa ka mid ah kulan la sheegay inay seddaxdani nin la yeesheen qareen ka tirsan dowladda Ruushka sanadkii la soo dhaafay.
Qareenkaasi, Natalia Veselnitskaya, ayaa la sheegay in seddaxdani nin oo aad ugu dhaw Trump ay u ballan qaaday inay la wadaagi doonto macluumaad dhaawac u geysan kara musharraxa Trump la tartmeysay ee Hilary Clinton.
Guddiga Senete-ka iyo guddi gaar ah oo ay Waaxda Caddaaladu magacowday waxay baaritaan ku sameynayaan in Ruushku uu isku dayay inuu faragelin ku sameeya doorashada si Trump uu ugu guuleysto. Waxay sidoo kale baarayaan in Ruushka iyo kooxda ololaha Trump ay arrintaa iska kaashadeen iyo in kale. Labaduba, Ruushka iyo Trump way beeniyeen arrintaasi.
Dhageysiga maanta wuxuu noqon doonaa kii ugu heer sareeyay ee ay guddiga sameeyaan tan iyo markii madixii hore ee FBI-da James Comey uu guddigaasi la hadlay bishii June.